Lacagta CARES Act ee Horukaca Bulshada ee Deeqaha (CDBG-CV)
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Deeqaha Horumarinta Bulshada|Lacagta CARES Act ee Horukaca Bulshada ee Deeqaha (CDBG-CV)
Maxay yihiin lacagaha CARES Act CDBG-CV?
Xeerka Gargaarka Coronavirus, Gargaarka, iyo Sharciga Amniga Dhaqaalaha (CARES Act) wuxuu 38M ugu qoondeeyey lacag dheeri ah CDBG-Coronavirus (CDBG-CV) iyada oo loo marayo Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka Mareykanka (HUD) ee barnaamijka CDBG ee Ganacsiga.
Guudmarka CDBG-CV (Ingiriis) (PDF)
Guudmarka CDBG-CV (Isbaanish) (PDF)
Ayaa ka heli doona lacagta CDBG-CV ganacsiga?
$ 7M oo ku jirta deeqaha CDBG-CV1 waxaa loo qaybiyaa qaaciddada ku saleysan dadweynaha / LMI ee loogu talagalay 27 dalada maxalliga ah ee go'aamisay miyiga CDBG magaala-madaxbannaan iyo degmooyin (magaalooyinka ay ka yaryihiin 50,000 kun oo dad ah oo aan qayb ka ahayn barnaamijka CDBG ee degmooyinku xaq u leeyihiin ee CDBG; iyo degmooyin ka yar 200,000 oo dad ah marka laga reebo magaalooyinka xaq u leh). Abaalmarinta Grant ee CDBG-CV1 ayaa liis garaysan halkan.
$ 15M oo ku jirta deeqaha CDBG-CV2 ayaa loo heli karaa dadka xaq u leh ee CDBG iyo kuwa aan diiwaangalinta lahayn ee CDBG-CV1 ee qaata qaaciddada dadweynaha / LMI ee loogu talagalay waxqabadyada mudnaanta leh ee deegaanka lagu go'aamiyay. Liiska qaybinta CDBG-CV2 waa halkan; abaalmarinta ugu dambeysa ayaa la go'aamin doonaa marka la helo lana oggolaado codsiyada CDBG-CV2.
$ 10.73M waxay ku maalgalineysaa Shaqaalaha & Adeegyada Gargaarka Gargaarka Gaajada ee COVID oo leh Waaxda Amniga Shaqada u qalma ./Washington Service Corps iyo Golayaasha Horumarinta Shaqaalaha ee Washington iyagoo ka shaqaaleysiinaya 300 shaqaale gudaha bangiyada cuntada iyo barnaamijyada nafaqada ee waaweyn ee gobolka oo dhan.
$ 3M oo ku jirta deeqaha COVID ee Ka-hortagga-Diyaarinta-Jawaab (PPR) ayaa maalgelinaysa waxqabadyada gobolka, kuwa maxalliga ah, qabyaaladda iyo kuwa aan macaash doonka ahayn si wax looga qabto mudnaanta soo ifbaxaysa iyo ka-faa'iideysiga fursadaha diiradda saaraya bulshooyinka aan u adeegsan ee nugul ee wajahaya COVID-19 caafimaadka bulshada, saamaynta dhaqaale iyo bulsho. .
Abaalmarinta Grant ee CDBG-CV1 ayaa liis garaysan halkan.
Tilmaamaha CDBG-CV1 ayaa laga heli karaa liiska liistada ilaha Caawinta Farsamada.
Su'aalo: La xiriir maamulaha mashruuca CDBG-CV1 ee gobolkaaga hadda ama Genny Matteson, Maamulaha Mashruuca CDBG-CV genny.matteson@commerce.wa.gov ama 360.701.3552.
Ayaa u qalma deeqda CDBG-CV2 iyo intee in le'eg?
Dhammaan deeq-bixiyeyaasha CDBG-CV1 (xaq-u-lahaanshaha CDBG iyo diiwaangelinta) waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan deeqda CDBG-CV2.
$ 15M oo ku jirta deeqaha CDBG-CV2 ayaa loo heli karaa dadka xaq u leh ee CDBG iyo kuwa aan diiwaangalinta lahayn ee CDBG-CV1 ee qaata qaaciddada dadweynaha / LMI ee loogu talagalay waxqabadyada mudnaanta leh ee deegaanka lagu go'aamiyay. Liiska qaybinta CDBG-CV2 waa halkan.
Xaashida Faahfaahinta Sanduuqa Xaq-u-lahaanshaha Maalgelinta CDBG-CV2 ayaa la heli karaa halkan.
CDBG-CV2 Xaashida Tafaasiisha Faahfaahinta Maalgalinta Diiwaangelinta ayaa laga heli karaa halkan.
Sidee magaalooyinka iyo degmooyin u qalma u codsadaan lacagaha CDBG-CV2?
Martiqaadyada lagu dhameystirayo dalabka deeqda ee CDBG-CV2 waxaa si toos ah loogu dirayaa awoodaha uqalma Abril 1. Magaalooyinka iyo gobolada codsanaya maalgalinta CDBG-CV2 waa inay ku buuxiyaan arjiga deeqda zoom Abril 30, 2021. Codsiyada soo daahay waxaa lagu aqbali karaa ogolaanshaha CDBG .
CDBG-CV2 way fidin kartaa oo balaarin kartaa waxqabadyada maalgelinta ee CV1 (iyo CV3) si dhaqso leh loogu isticmaalo lacagaha. Haddii mudnaanta cusub ee maxalliga ah soo ifbaxday, CDBG-CV2 waxay maalgelin kartaa waxqabad kasta oo u qalma CDBG si looga hortago, loogu diyaar garoobo, ama looga jawaabo Coronavirus. Eeg Tilmaamaha Hawlaha U Qalma ee CDBG-CV2.
Kaliya xisaabaadka 'ZoomGrants' iyo diiwaan gelinta ay abuureen xaquuqda CDBG iyo deeq bixiyaasha CDBG-CV1 (magaalooyin ama degmooyin) waxay ansax ku yihiin soo gudbinta arjiga CDBG-CV2. Marka koontada la abuuro, dowladda hoose ee u-qalma ayaa marti qaadi karta wada-hawlgalayaasha si ay uga caawiyaan dhammaystirka arjiga.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isticmaalka ZoomGrants ayaa laga heli karaa halkan.
Talo soo jeedin: Dawlada hoose ee codsaduhu waa inay go'aamisaa inay u balansan tahay dhageysiga dadweynaha ee CDBG, maadaama ay bilaabayaan inay ka shaqeeyaan codsigooda. Eeg Tilmaamaha Ka-Qaybgalka Muwaadiniinta ee CDBG-CV2 halkan.
Bogagga websaydhka websaydhka ee 3/22/21 ayaa laga heli karaa halkan, CDBG-CV2 Codsiga Webinar PowerPoint.
Su'aalo: La xiriir maamulaha mashruuca CDBG-CV1 ee hadda jira ama Eric Guida, Maamulaha Mashruuca CDBG-CV eric.guida@commerce.wa.gov ama 360.725.3044
QAAD SHAQAALAHA IYO ADEEGYADA GURMADKA GURMADKA
Sidee bay Golayaasha Horumarinta Shaqaalaha ee Washington iyo Adeegga Adeegga ESD / Washington u soo gudbiyaan soo-jeedinta Adeegyada & Adeegyada Gargaarka Gargaarka ee COVID?
Adeegso Xariirka Adeegyada ee 'COVID Relief Relief Staffing & Services', oo la heli karo halkan.
Dhameystir macluumaadka soo-jeedinta bilowga ah ee oggolaanshaha CDBG-CV, abaalmarinta iyo qandaraaska illaa Abriil 30, 2021. Codsiyada soo daahay waxaa lagu aqbali karaa oggolaanshaha CDBG.
Macluumaadka soo-jeedinta dheeriga ah markaa waa in lagu soo gudbiyaa si ku-meel-gaar ah maaddaama barnaamijyada cuntada gaarka ah iyo shaqaalaynta la go'aaminayo.
Su'aalo: La xiriir Stacey Voigt, Maamulaha Mashruuca CDBG-CV ee stacey.voigt@commerce.wa.gov ama 360.867.8181.
QAADASHADA KA HORTAGA-KA-DIYAAR-GELINTA (PPR) MAALGELIYADA
Sidee hay'adaha Gobolka Washington, dawladaha hoose, dawladda qabaa'ilka, iyo ururada aan macaash doonka ahi u dalban lacagaha CDBG-CV PPR?
$ 3 milyan oo bilow ah ayaa loo heli karaa ururada iyo waxqabadyada ka hadlaya mudnaanta gobolka ama gobolka ee mudnaanta leh ee barnaamijka gobolka. Waxqabadyada u-qalma waxaa ka mid ah adeegyada dadweynaha, kaalmada shirkadaha yaryar, tas-hiilaadka iyo qorshaynta ku xusan Tilmaamaha Hawlaha U Qalma ee CDBG-CV2, Taasi waxay diiradda saareysaa bulshooyinka aan loo adeegsan oo nugul ee wajahaya COVID-19 saameynta caafimaadka bulshada, dhaqaalaha iyo bulshada. Waxqabadyadu waa inay la kulmaan ujeeddada qaran ee CDBG iyadoo ay ugu horreyn ka faa'iideysanayaan dadka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah (LMI); ama, kiisaska xaddidan, wax ka qabashada baahida degdegga ah ee la xaqiijiyay. Lacagaha aan wali ka maarmin deeqaha kale ee CDBG-CV ayaa laga yaabaa in loo helo deeqo dheeraad ah oo PPR ah. Deeqaha PPR ee la oggol yahay waxay u dhexeeyaan $ 30,000 ilaa $ 1,250,000, iyadoo kuxiran nooca waxqabadka. Soo jeedinta mashruuca waxaa loo tixgelin doonaa si joogto ah, maalgelin la heli karo. Lacagaha waa in la kharash gareeyaa ugu dambeyn Luulyo 2023.
La xiriir Maamulaha Qaybta CDBG-CV si loo hubiyo helitaanka lacagaha iyo u-qalmitaanka
Soo gudbi CDBG-CV COVID PPR Foomamka Codsiga Maalgelinta Hindisaha
Sidee dadka ama ganacsiyada saamaynta ku leh COVID-19 ay u helaan gargaarka CDBG-CV?
Barnaamijka CDBG ee gobolka ayaa maalgeliya adeegyada iyo mashaariicda maxalliga ah. Barnaamijka CDBG ee gobolku ma siiyo deeqo toos ah shaqsiyaadka ama ganacsiyada. La xiriir dowladda hoose, barnaamijka waxqabadka bulshada, ama ururka horumarinta Associ si loo barto haddii kaalmada ay maalgeliso CDBG ama agab kale la heli karo, iyo aqoonta. Caawinta CDBG waxaa loogu talagalay dadka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyo shirkadaha yar-yar (ganacsiyada yaryar ee leh shan shaqaale ama ka yar, midna uu yahay milkiilaha).
Goorma ayaa lacagtu bilaabmaan oo dhammaanayaan?
Lacagta ugu horreysa ee CDBG-CV waxay dib u soo celin kartaa kharashyada la oggol yahay ee waxqabadyada la oggolaaday ee COVID-19 laga bilaabo Maarso 27, 2020 (Taariikhda oggolaanshaha CARES). Lacagaha waa in lagu bixiyaa waqti ku habboon si wax looga qabto baahiyaha degdegga ah. Qandaraasyada CDBG-CV waxay dhisi doonaan taariikhda dhammaadka, oo laga yaabo inay sii dheereysato Juun 30, 2023.
Guudmarka CDBG-CV - Ingiriis (PDF)
Tilmaamaha Wadashaqeynta ee CDBG-CV1 (PDF)
Xaashida Codsiga Maalgelinta CDBG-CV1 (Sare)
Tilmaamaha Hawlaha U Qalma ee CDBG-CV1 (PDF)
CRF iyo CDBG-CV Waxqabadyada Uqalma Isbarbardhiga (PDF)
Tilmaamaha Kaqeybgalka Muwaadinka CDBG-CV1 (PDF)
CDBG-CV1 LMI iyo Tilmaamaha Ujeeddooyinka Qaranka (PDF)
CDBG COVID-19 Hagaha Gargaarka Microenterprise (PDF)
CDBG COVID-19 Codsiga Caawinta Microenterprise iyo Foomka Xaqiijinta (Erey)
CDBG COVID-19 Heshiiska Caawinta Microenterprise (Erey)
CDBG COVID-19 Warbixinta Faahfaahinta Bixinta Lacagta ee Microenterprise (Sare)
CDBG COVID-19 Hagaha Bixinta Nolosha (PDF)
CDBG COVID-19 Codsiga Bixinta Nolosha iyo Foomka Xaqiijinta (Erey)
CDBG COVID-19 Codsiga Bixinta Nolosha iyo Foomka Xaqiijinta (Isbaanish / Espanol) (Erey)
CDBG COVID-19 Warbixinta Faahfaahinta Bixinta Nolosha (Sare)
Buug-gacmeedka maaraynta CDBG iyo CDBG-CV iyo Foomamka
Maamulaha Qaybta CDBG-CV